अमेरिकामा भाइटिकाको सबैभन्दा उत्तम साइत आज ११ बजे
नेपालमा भाइटिका सम्पन्न भएको छ भने अमेरिकामा आज लगाइदै छ । न्युयोर्कमा भाइटिकाको उत्तम साइत न्युयोर्क समय आज सोमबार विहान ९ बजेर ५९ मिनेटदेखि ११ बजेर १३ मिनेटसम्म रहेको पण्डित ज्योतिष उद्धव शास्त्रीले जानकारी दिनुभयो ।
त्यसमा पनि सबैभन्दा उत्तम बेला ११ बजेको समय रहेको उहाँले बताउनुभयो । त्यो बेला नभ्याएमा १ बजेर २४ मिनेटदेखि २ बजेर ५६ मिनेटसम्म भाइटिका लगाउन शुभ छ ।
भाइटिकाको दिनमा मृत्युवाण पनि भाइटिका एउटा पर्व भएकाले मृत्युवाणको विचार गर्न नपर्ने शास्त्रीले जानकारी दिनुभयो । ब्रतबन्ध गर्दा रोगबाण, घर छाउँदा अग्नीवाण, लामोयात्रा गर्दा चोरवाण र विवाह गर्ने समयमा मृत्युवाण हेर्ने चलन रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । मृत्युवाण मृत्युयोग नभएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
ज्यो. पं. उद्धव शास्त्री
भाइटिका एउटा पर्व भएकाले मृत्युवाणको विचार गर्न नपर्ने र ढुक्कसाथ भाइटिका गर्नसकिने उहाँले बताउनुभयो । मृत्युवाण र बुधबार एकसाथ परेमा भने त्यो दिन विवाह नगर्ने चलन रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
भाइटिकाको तिथी अमेरिकामा पनि सोमबार राती ८ बजेर २३ मिनेटसम्म चल्ने भएकाले नेपालमा भाइटिका लगाएपछि अमेरिकामा भाइटिका लगाउन सकिने भएको हो । भाइटिकाको तीथिको सुरुमा नेपालमा मनाउने र अमेरिकामा मनाउँदा तीथिको पछिल्लो भाग हुने उहाँले बताउनुभयो ।
नेपालमा सोमबार ९ बजेर १२ मिनेटपछि भाइटिकाको कात्तिक शुल्क द्वितीया सुरु भएको छ भने अमेरिकामा सोमबार राती ८ बजेर २३ मिनेटसम्म बस्नेछ ।